Gollaha Wasiirada Oo Isku Raacay In La Xoreeyo Deegaamada Maqan Kahor Doorashada iyo Dagaal Bilaabanaya
November 1, 2018 puntlandnews
Puntlandnews.net (Nairobi)-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha Xukuumada Jubbaland.
Ugu horayn Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ka warbixiyay xaalada Siyaasada wadanka waxaa uu Madaxweynahu sheegay in shirkii Dowlad Goboleedyada dalka ee dhawaan ka qabsoomay Garowe uu ahaa mid isbadal lagu sameeyay madasha iyo sidii loo qaban lahaa shirweynaha Dhuusomareeb.
Siyaasada wadanka ayuu sheegay in aysan daganayn oo ay tahay in cid walba ay ka run sheegto sida xalka lagu heli karo.
Wasiirka Amniga Mudane Cabdirashiid Janan ayaa faah faahin ka bixiyay howlgalada lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo jiidaha hore e ay ku sugan yihiin Ciidamada qalabka sida.
Dhinaca kale Wasiirku wuxuu sheegay in Ciidamo gaar ah oo la sameeyay ay yihiin kuwo loogu tala galay in ay sugaan nabadgalyada Magaalada Kismaayo oo hada ah Caasimada KMG ah ee Dowlada wuxuu intaas ku daray in ay leeyahiin tababar ku filan oo iyo habdhaqan wanaagsan oo ay bulshada kula dhaqmaan.
Dhinaca kale Wasaarada qorshaynta ayaa iyana soo bandhigtay hanaan loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka badaha gaar ahan in laga hortago isticmaalka shabaagta duleelada yar yar kuwaas oo xiita xaalufinaya ugxanta kaluunka.
Wasaaradaha Caafimaadka Waxbarashada iyo Kaluumaysiga ayaa soo bandhigay shirar ay kaga qayb galeen dalka iyo dibada kuwaas oo guulo laga gaadhay gaar ahaan Wasaarada Ganacsigu waxay ka warbixisay heshiiska Ganacsiga Kaluumaysiga ee Mombasa kaas oo Jubbaland ay kaluun kala duwan halkaas u iibgayn doonto.
Dhinaca kale Wasaarada Arimaha gudaha ayaa ka warbixisay howlo shaqo oo ay ka waday gaar ahaan dhismaha Xarumo Cusub oo dadka loogu adeegayo iyo kuwo horay oo dhisay oo halkaas laga howlgaliyay.